စာရာသည်ဖာဂူဆန်သူမကထောင်ထဲမှာပြီးနောက်သူနှင့်အတူမိတ်ဆွေများကကနျြရပါသလဲ - ကလူ - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » လူတွေ & ပုံစံမျိုးမှာနေထိုင် "ဆာရာဖာဂူဆန်ထောင်ထဲမှာပြီးနောက်သူနှင့်အတူမိတ်ဆွေများကကနျြရစျသလော - ကလူ
မင်းသားအင်ဒရူးဂျက်ဖရီ Epstein နှင့်အတူလင့်များထိန်းသိမ်းခြင်းအပေါ်ရှင်းလင်းချက်ရှိသည်ဖို့တော်ဝင်မိသားစု၏တစ်ခုတည်းသောအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးမဟုတ်ပါဘူး။
ဒီဇင်ဘာလ 2010 ၌သူ၏မန်ဟက်တန်အိမ်ကြီးထဲမှာအင်ဒရူး Epstein နှင့်အတူအငြင်းပွားဖွယ်ရာခြောက်ရက်ကြာခရီးစဉ်ကောင်းစွာသွားလေ၏။ -documenté။ သို့သော်ထိုသို့အင်ဒရူးစာရာဖာဂူဆန်၏ယခင်ဇနီးဖေဖော်ဝါရီလ 2010 ဘဏ္ဍာရေး၏အိမ်တွင်အချိန်သုံးစွဲထားပြီးပုံရသည်။
မင်းသားအင်ဒရူးကသူ့လက်ဝဲဘက်, ဘဏ္ဍာရေးဂျက်ဖရီ Epstein နဲ့သူ့ရဲ့ခင်မင်ရင်းနှီးများအတွက်ဗြိတိန်နိုင်ငံတွင်ပြင်းထန်သောစိစစ်များ၏ဘာသာရပ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ (Getty Images ၏ဓါတ်ပုံများနှင့်ရဲအရာရှိရဲ့ရုံး Palm Beach တွင်ကောင်တီ)
Epstein 2008 အတွက်အသေးစားနှင့်အတူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုများမှအပြစ်ရှိကြောင်းနှင့် Palm Beach တွင်ဖလော်ရီဒါမှာရှိတဲ့အကျဉ်းထောင်အလုပ်၏လွှတ်ပေးရန်အစီအစဉ်ကိုအောက်မှာထောင်ချမှတ်ခံရပြီးမှဤအရပ်ဌာနကိုယူမည်ဖြစ်သည်။
နေ့စဉ် Daily Mail က et New York Post ပြည်တွင်းဝန်ထမ်း Epstein ၏သက်တမ်းကြာအဖွဲ့ဝင်များ, နေရာထိုင်ခင်းအလုပ်သမားများ, June-Lyn Fontanilla နှင့်ခင်ပွန်း Jojo နှင့်အတူလောကအတွက်ဖာဂူဆန်၏ဓာတ်ပုံများကိုတယ်။ တစ်ဦးကဓာတ်ပုံဖိုင်တွေကိုစုံတွဲတစ်ဝှမ်းကသူ့လက်မောင်းတွေနဲ့ York မြို့၏ Duchess ပြသထားတယ်နှင့် sumptuous မြို့တွင်းစုပေါင်း Epstein အတွင်းချိုးပြီဟန်, နယူးယောက်ပို့စ်သတင်းစာကိုပြောသည်။
The Daily Mail ကဓာတ်ပုံပဲဖာဂူဆန်နယူးယောက်မြို့မှခရီးထွက်ကြောင်းတစ်ချိန်တည်းအကြောင်းကိုခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်ဟုဆိုသည် ကုလသမဂ္ဂဖြေရှင်းရန် နိုင်ငံအတွင်းရှိအဓိကငလျင်၏သားကောင်များကိုကူညီချီလီတွင်အမျိုးသမီးများ၏စည်းရုံးအကြောင်းကိုမတ်လ 2010 ရဲ့အစမှာ။ နောက်ထပ်ဓာတ်ပုံကိုတစ်ဦးပြုံးဖာဂူဆန်ဟာအပြုံး Jojo Fontanilla နှင့်အတူအပြင်ဘက်ရပ်နေသည်ကိုပြသ
ဖာဂူဆန်ဖြစ်ကောင်းသည်သူ၏ပြည်တွင်းအကူအညီဖြင့်နယူးယောက်နှင့်သူ၏ခရီးစဉ်အားမိမိခရီးစဉ်အတွင်း Epstein မမြင်ရပြီ။ ဝါရှင်တန်ပို့စ် ကပြောသည် Epstein အဆိုပါခရိုင်အကျဉ်းထောင်ကနေလွတ်လာခံရပြီးနောက် Palm Beach တွင်မိမိအကမ်းနားအိမ်ခြံမြေအတွက်နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ချထားခဲ့သည်။ မိမိအဝါကျဇူလိုင်လ 2010 အတွက်အဆုံးသတ်; ထို့နောက်သူသည်သူအင်ဒရူးအပါအဝင်ကသူ၏ကြွယ်ဝသောနှင့်အစွမ်းထက်သူငယ်ချင်းအချို့နှင့်အတူလူမှုရေးအဆက်အသွယ်ပြန်လည်စတင်ရှိရာဝါရှင်တန်ပို့စ်သည်အတိုင်း, နယူးယောက်သို့ပြန်သွား၏။
ပြစ်မှုထင်ရှား pedophile နှင့်အတူစာရာဖာဂူဆန်, ဝန်ထမ်းတဦး၏ဤဓာတ်ပုံကို @ nypost (သူနေအိမ်အကျယ်ချုပ်စဉ်) ဖေဖော်ဝါရီလ 12 2010 အပေါ်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ကြပုံရသည်။ https://t.co/hEqKcua9Qp pic.twitter.com/xWzGHdj0LS
အချစ် - Lola (@LoveLolaHeart) အဆိုပါ 11 စက်တင်ဘာလ 2019
ဖာဂူဆန်၏ရုပ်ပုံများ The Daily Mail ကနှင့် The New York မြို့စာတိုက်နှင့်အနြေ္ဒနှင့်အခြားကြယ်များနှင့်အတူ, Fontanillas နှင့် Epstein န်ထမ်းများ၏အခြားအဖွဲ့ဝင်သူမ၏နှင့်အတူရှိုးကြောင်းအစီရင်ခံနေကြတယ်,
သည်အခြားကျော်ကြားသောလူမျိုးသည်ဟဲဗီးဝိတ်ဘီလ်ကလင်တန်နှင့်ဂျွန်ကယ်ရီ John Kerry မူဝါဒများပါဝင်သည်; ဟောလိဝုဒ်နဲ့ Chris Tucker နှင့်ဟေလာရီ Swank သရုပ်ဆောင်; နှင့် Petra Nemcova ပုံစံ။ Epstein သူ၏လက်ရုံးဝန်ထမ်းတစ်ဝှမ်းတစ်ဟားဗတ်ချွေးထွက်ခြင်းနှင့်အဖြူဝတ်ထားနောက်ထပ်ပေါ်နေချိန်တွင်ကလင်တန်နှစ်ခုရုပ်ပုံများပေါ်, The Daily Mail ကပြောသည်။
ဖာဂီ (အထက်) ၏တစ်ဦးကဓာတ်ပုံတစ်ပုံအများကြီးအတူတူပင်လမ်းအတွက်ဖေဖော်ဝါရီလ 2010 အတွက်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။ သူမက New York မှာခဲ့တယ် ... https://t.co/nu23440NzG မှတဆင့် @MailOnline နောက်ထပ်ပုံများ #JeffreyEpstein '' ကျေးကျွန် & စာရာ # ဖာဂူဆန်, ဇနီး #PrinceAndrew ။ မျက်စိကိုပိတ်။
- စာရာ Whalen (@ SarahWhalen7) အဆိုပါ 11 စက်တင်ဘာလ 2019
The Daily Mail ကပုံအများစုကိုခေါ်ဆောင်သွားကြသည်ဟုအခိုင်အမာစဉ်က New York Post, Jun-Lyn Fontanilla Facebook ပေါ်မှာပုံထုတ်ဝေခဲ့ရကြောင်းပြောပြသည်။ Epstein မတိုင်မီအကျဉ်းထောင်သို့သွားကြ၏။ 2010 နှင့် 2009 ယူဖာဂူဆန်နှင့် Nemcova ၏ရုပ်ပုံများ, စိုးမိုးရေးမှခြွင်းချက်ရှိပါတယ်။
Epstein, 2000 နှစ်ပေါင်းများကြားတွင်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့အစုံစမ်းစစ်ဆေးအသက်မပြည့်သေးမိန်းကလေးတွေများစွာလူကုန်ကူးမှုသံသယကားအငြင်းပွားဖွယ်ရာ၏တစ်စိတ်တစ်ဒေသအဖြစ်ခရိုင်ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံရခဲ့သည်ခံခဲ့ရသည်။ မိုင်ယာမီမှာရှိတဲ့အမေရိကန်ရှေ့နေချုပ်ရဲ့ရုံးနှင့်အတူတစ်ဦးကအသနားခံသဘောတူညီချက်သူ့ကိုဖက်ဒရယ်တရားစွဲဆိုမှုရှောင်ရှားရန်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။
အန္ဒြေနှင့် Epstein အကြားချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှု၏ပြင်းထန်မှုသူလိင်လူကုန်ကူးမှုသစ်ကိုစွဲချက်အဘို့စမ်းသပ်စောင့်ဆိုင်းရာသြဂုတ်လ 10 ပေါ်တွင်မန်ဟက်တန်ထောင်၌ဘဏ္ဍာရေးသတ်သေကတည်းကပိုမိုပြင်းထန်လာခဲ့သည်။
အင်ဒရူးဖော်ရွေသောဆက်ဆံရေးရှိပါတယ်ဘယ်သူကိုနှင့်အတူဖာဂူဆန်, ကိုလည်းအရှုပ်တော်ပုံသို့ဆွဲငင်ခဲ့ မေးခွန်းများကိုအတူရင်ဆိုင်ခဲ့သည် နှောင်းပိုင်း Multi-သန်းကြွယ်သူဌေးနှင့်အတူ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အသင်းအဖွဲ့များပေါ်မှာ။
တရားရုံးစာရွက်စာတမ်းများအတွက်လေယာဉ်ခရီးစဉ်မှတ်တမ်းများကို ကိုးကား. The Daily Mail က, အစီရင်ခံတင်ပြ သူမအင်ဒရူးနဲ့သူတို့ရဲ့သမီးတို့, Princess Eugenie နှင့်eBeatrice နှင့်အတူအားလပ်ရက်အပေါ်နေစဉ်ဖာဂူဆန်, 1998 အတွက်ဘဟားမားအတွက် Epstein တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးခဲ့သည်။
အခြားအစီရင်ခံစာအတွက်, Daily Mail က ဖလော်ရီဒါမှာရှိတဲ့ဆက်ခံ Epstein အတွက်ရဲကသိမ်းဆည်းရမိတဲ့မှတ်စုစာအုပ်ဖာဂူဆန်နှင့် Epstein 2005 နှင့်အဆက်အသွယ်ရှိကြ၏ကြောင်းအစီရင်ခံကြောင်းပြောဆိုထားသည်။ ဇန်နဝါရီလ 25 2005 ရက်စွဲပါအမည်မသိလက်ကရေးသားတစ်ဦးကမှတ်ချက်,, "York မြို့ဆာရာ (ဖာဂူဆန်) ၏ HRH Duchess" စောင့်ဆိုင်းနေကြောင်းဖော်ပြထား "ခေါ်ဆိုခ။ "
အန္ဒြေနှင့်ဖာဂူဆန် Beatrice ၏မွေးနေ့ပါတီတက်ရောက်ရန်သူ့ကိုဖိတ်ခေါ် 2006 အတွက် Epstein နှင့်အတူအတော်လေးမိတ်ဆွေများကိုခဲ့ကြသည် - ရက်ပေါင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလူကုန်ကူး၏စွပ်စွဲချက်ဘဏ္ဍာရေးငွေပေးငွေယူ, Daily Mail ကများအတွက်ပထမဦးဆုံးဖမ်းဆီးမတိုင်မီ လည်းအစီရင်ခံတင်ပြ .
18e ဗစ်တိုးရီးယားရေးရာမွေးနေ့၏ sumptuous ထိုပွဲကိုခံဘို့အနြေ္ဒနှင့်ဖာဂူဆန်၏ဧည့်သည်များများ၏စာရင်းကိုလည်း Ghislaine Maxwell နဲ့ရုပ်ရှင်လုပ်ငန်းရှင်ကြီး Weinstein အရှက်ကွဲပါဝင်သည်။ အဆိုပါ Gala နီးပါး 500 000 ဒေါ်လာကုန်ကျနှင့် corsets နဲ့ animations တွေကိုနှင့်အတူ sumptuous ဗစ်တိုးရီးယားဆင်မြန်းသောအဝတ်ကိုဝတ်ဆင်အမျိုးသမီးဧည့်သည်များတင်ပြ, The Daily Mail ကပြောသည်။
အဆိုပါ pedophile ဂျက်ဖရီ Epstein မင်းသမီး Beatrice ၏ 18e နှစ်ပတ်လည်နေ့တက်ရောက်ခဲ့သည် https://t.co/Ogc53WzU4h မှတဆင့် @MailOnline
- Rosanna Arquette✌🏼🇺🇸 (@RoArquette) အဆိုပါ9စက်တင်ဘာလ 2019
Maxwell, တစ်ဦးကိုဗြိတိသျှ socialite, အန္ဒြေနှင့် Epstein တစ်ဦးနှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်မိတ်ဆွေတစ်ဖြစ်ပါတယ်။ သားကောင်များ Epstein ကြောင်း Epstein နှင့်အတူလိင်ရှိသည်ဖို့အသက်မပြည့်သေးမိန်းကလေးများနှင့်အမျိုးသမီးများကိုစုဆောင်း၏ပြောသည်သူမ၏ "Madame" ဖြစ်ခြင်း၏သူ့ကိုစွပ်စွဲ။
2011 ဖာဂူဆန်အတွက် တောင်းပန်နောင်တထုတ်ဖော်ပြောဆို ဆက်စပ်ခံရဖို့။ Epstein အတူ။ သို့သော်သစ်ကိုမြိန်အသေးစိတ်ကိုအင်ဒရူး Epstein အတူချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးပေါ်ထွက်လာဖို့စတင်ခဲ့ပြီးမှသာ။ အသေးစိတ်ဒီဇင်ဘာလ 2010 နှင့်စွပ်စွဲချက် "လိင်ကျေးကျွန်" Epstein တဦး၏စွပ်စွဲချက်နှင့်အတူအဆက်အသွယ်အတွက် Epstein မှမင်းသား၏ခရီးစဉ်များပါဝင်သည်။
The Daily Mail ကနှင့်အင်တာဗျူးတွင်ခုနှစ်, မတ်လ 2011 ရက်စွဲပါဗာဂျီးနီးယားရောဘတ်Giuffrèကပွောသူမက New York မှာ 17 နှစ်ပေါင်းနှစ်အရွယ်တွင်အင်ဒရူးနှင့်အတူလိင်ဆက်ဆံရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေခဲ့သည်တဲ့နောက်ဆက်တွဲတရားစီရင်ရေးအင်တာဗျူး, လန်ဒန်ကပြောသည်နှင့်ပေါ် တစ်ဦး၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် Epstein ပုဂ္ဂလိကကျွန်း "တခြားအသေးစားမိန်းကလေးများနှင့်အတူ orgy ။ "
ဖာဂူဆန်သူမ၏ခင်ပွန်းဟောင်းမှ 18 000 ဒေါ်လာထက်ပိုမိုပေးဆောင်ဖို့ Epstein ကကူညီပေးခဲ့ဖူးကြောင်းကြေးနန်းအသိအမှတ်ပြုနြေ္ဒ Epstein ( "The Prince နှင့် Perv") နှင့်အတူGiuffrèကပွောနှင့်ချစ်ကြည်ရေးသတင်းစာခေါင်းစဉ် assertions မှတုံ့ပြန် သူမကမရတဲ့လုပ်ခနီးပါး 100 000 ဒေါ်လာအကြွေးဘယ်သူကိုမှသူ့ယခင်လက်ထောက်၏တဦးတည်း။ အခွားသောဥပဒေကြမ်းများ။
"ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ, ငါသည်နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းဂျက်ဖရီ Epstein ငါနှင့်အတူပါသမျှသောစကားတို့ကိုဆိုလမ်းထဲမှာပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့နောင်တ" ဟုသူမကအချိန်ကိုမှာကြေးနန်းကိုပြောသည်။ "ငါသည် pedophilia နှင့်ကလေးများမဆိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုရွံရှာငါသည်ဤငါ၏အစိတျအပိုငျးအပေါ်တရားစီရင်ကြီးမားတဲ့အမှားတစ်ခုဖြစ်သည်ကိုငါသိ၏။ "
ထိုအချိန်တွင်အင်ဒရူးကုန်သွယ်ရေးနှင့်နိုင်ငံတကာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအတွက်ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း၏အထူးကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ပါလီမန်အဖွဲ့ဝင်များ Daily Beast အတိုင်းမိမိထင်ရှားတဲ့အနေအထားကနေနှုတ်ထွက်စာကိုတောင်းဆိုနေတာစတင်ခဲ့သည်။ အင်ဒရူးနောက်ဆုံးတော့ 2011 အတွက်နှုတ်ထွက်ခဲ့သည်။
အခါမိမိကိုယ်ကိုသတ်သေ Epstein များ၏သတင်းများ, ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်အင်ဒရူးဖာဂူဆန်နှင့်စကော့တလန်အတွက် Balmoral သူမ၏လယ်ပြင်၌ဘုရင်မအဲလစ်ဇဘက်သွားရောက်စုဝေးစေခဲ့သည်။ Epstein ၏အသေခံပြီးနောက်နေ့, အင်ဒရူးတစ်ဦးပြုံးပြုံးသူမ၏မိခင်နှင့်အတူကားတစ်စီး၏နောက်ကျောထိုင်ခုံအတွက်ဘုရားကျောင်းကိုသူ၏လမ်းအပေါ်မှတ်တမ်းတင်ဓါတ်ပုံများရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။
ရက်အနည်းငယ်အကြာမှာတော့ဖာဂူဆန် အင်ဒရူးလွတ်မြောက်ပြီ ပုံဒုက္ခဆင်းရဲနှင့်အတူညှဉ်းဆဲ။ 48 သန်းတန်ဖိုးရှိပုဂ္ဂလိက villa အတွက်တည်းခိုနေစဉ်သူတို့ဂေါက်သီး privacy ကိုအခွင့်ကောင်းကို ယူ. ကျင့်သုံးရှိရာစပိန်အတွက်ဇိမ်ခံဟိုတယ်တစ်ခုအားလပ်ရက်
နယူးယောက်၏ Duke ထပ်တလဲလဲGiuffrèကပွောသို့မဟုတ် Epstein သားကောင်ခဲ့အလွဲသုံးစားမှုမဆိုအသိပညာနှင့်အတူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးရှိခြင်းကိုငြင်းပယ်ခဲ့သည်။ ပြီးခဲ့သည့်လကဖြန့်ချိမယ့်ဂရုတစိုက်ကူညီမှုတစ်စုံတစ်ရာလုပ်နေတဲ့ကြေညာချက်မှာတော့အင်ဒရူးကိုလည်းဘဏ္ဍာရေးနှင့်သူတစ်ဦးကိုငါမြင်၏ဟုနှင့်အတူသူ၏ "အသင်းအဖွဲ့သို့မဟုတ်ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှု" ကိုးကားပြီးသူကအမြဲ Epstein နှင့်အတူတကယ်ဖော်ရွေသောစိတ်ကူးမှေးမှိန်စေရန်ကြိုးပမ်းလျက်ရှိသည် သို့မဟုတ်တစ်နှစ်နှစ်ကြိမ်။  သို့သော်တော်ဝင်စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်စာနယ်ဇင်းသမားများအင်ဒရူး Epstein နှင့်ကြွယ်ဝသောနှင့်အစွမ်းထက်အခြားသူများနှင့်နီးစပ်ခင်မင်ရင်းနှီးထုတ်ဖော်ပြောဆိုပြီးနောက်ဒီကြေညာချက်ကိုလျစ်လျူရှုခဲ့ကြသည်။
အဆိုပါဗျာဒိတ်တော်များကိုအင်ဒရူး Epstein နှင့်အတူအများအပြားခရီးစဉ်ကိုဖန်ဆင်းနှင့်သူ၏အမျိုးမျိုးသောအိမ်တွေမှာတည်းခိုကြောင်းပြသပါ။ အင်ဒရူး Epstein လည်း 1999 အတွက်ဝင်ဆာရဲတိုက်မှာ 40 အတွက် Balmoral မှာတည်ခင်းဧည်နှင့်၎င်း၏ 2000e မွေးနေ့ပါတီ။ 2010 အတွက်မန်ဟက်တန်အတွက်အိမ်ကြီး Epstein ရန်သူ၏ခရီးစဉ်အတွင်းသူနှစ်ဦးကိုတော်တော်လေးငယ်ရွယ်ရုရှားအမျိုးသမီးခြေ massage တစ်ခုစာပေအေးဂျင့်များကရှုမြင်ကြသည်။ 